Thibaut Courtois Oo Sii Diyaarsaday Qorshihii Uu Kaga Bixi Lahaa Kooxda Chelsea – Gool FM
Thibaut Courtois Oo Sii Diyaarsaday Qorshihii Uu Kaga Bixi Lahaa Kooxda Chelsea
(Chelsea) 02 May 2018. Warbaahinta gudaha dalka England ayaa maanta oo Arbaca ah shaaca ka qaaday in goolhaayaha xulka qaranka Belgian Thibaut Courtois uu doonayo in safka Blues uu kaga dhaqaaqo beeca xurta ah, kadib marka uu soo idlaado heshiiskiisa xagaaga 2019 ee sanadka soo socda.
Wargeyska “Daily Mail” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Thibaut Courtois uusan dooneynin saxiixida heshiis cusub uu kusii joogayo kooxda Chelsea, isagoo aaminsan in kooxda reer London uu wax walba u soo qabtay tan iyo markii uu kasoo laabtay heshiiskii amaahda ahaa ee Atletico Madrid.
Waxaa la fahansan yahay in Thibaut Courtois uu doonayo dib ugu laabashada horyaalka La Liga ee dalka Spain, waxaana la tuhunsan yahay inuu qeyb ka noqon doono kooxda Real Madrid.
Saraakiisha kooxda Los Blancos ayaa waxay raacdo ugu jiraan saxiixa goolhaaye cusub, si uu u noqdo badalka goolhaayaha xulka qaranka Costa Rican ee Keylor Navas.
Taageerayaasha Bayern Munich oo ka carooday asxaan uu James Rodriguez xalay u sameeyay Marco Asensio
Dekadda iyo Heegan oo kala adkaan waayay….(Laakiin Dekadda waxay heysataa Fursad ay markii 2-aad oo xiriir ah ku hanan karto Horyaalka)